Ch 8 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 8 Matthew
8:1 Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra, nisy vahoaka be nanaraka azy.
8:2 Ary indro, boka, manakaiky, niankohoka izy, nanao hoe:, "Tompo ô, raha toa ianao ka vonona, ianao mahay manadio ahy. "
8:3 Ary Jesosy, manitatra ny tànany, nanendry azy, nanao hoe:: "Mety Aho. Madiova ianao. "Ary niaraka tamin'izay ny habokany nisy nodiovina.
8:4 Ary hoy Jesosy taminy:: "Tandremo sao ianao hilaza tsy misy. fa mandehana, misehoa amin'ny mpisorona, ka mitondrà ny fanatitra izay Mosesy toromarika, ho vavolombelona ho azy ireo. "
8:5 Ary nony niditra tao Kapernaomy, kapiteny nanatona, mangataka azy,
8:6 ary nanao hoe:, "Tompo ô, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, mararin'ny paralysisa ka mijaly loatra mafy. "
8:7 Ary hoy Jesosy taminy:, "Ho avy Aho hahasitrana azy."
8:8 Sy ny fandraisana andraikitra, ilay kapiteny nanao hoe:: "Tompo ô, Izaho tsy miendrika hidiranao ao ambanin'ny tokony tafon-tranoko aho, fa mitenena ihany, ary ny mpanompoko dia ho sitrana.
8:9 Fa I, koa, lehilahy aho napetraka eo ambany fahefana, manana miaramila eo ambany ahy. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray, 'Mandehana,'Ary dia mandeha izy, ary ny anankiray, 'Avia,Dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko, Izao no ataovy,', Dia manao izy. "
8:10 Ary, nandre izany, Jesosy nanontany tena. Ary hoy izy ireo izay nanaraka azy: "Amen Lazaiko aminareo, Aho fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Isiraely.
8:11 Fa lazaiko aminareo, fa maro ho tonga avy any atsinanana sy any andrefana, ary izy no hipetraka-mihinana amin'i Abrahama, ary Isaka, ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra.
8:12 Fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. "
8:13 Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny, "Mandehana, ary toy ny efa nino, dia aoka hatao ho anao. "Ary ilay mpanompo dia sitrana tamin'izany ora izany.
8:14 Ary Jesosy, nony tonga tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny reniny-in-lalàna marary nandry teo amin'ny tazo.
8:15 Ary nanendry ny tànany, ary niala taminy ny tazo, dia niainga izy ka nanompo azy ireo.
8:16 Ary nony hariva ny andro tonga, dia nentin'ny olona tany aminy olona maro izay efa nanana demonia, ary ihany no namoahany ny fanahy ratsy tamin'ny teny. Ka dia nositraniny izay rehetra manana aretina,
8:17 mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany, nanao hoe:, "Izy naka ny rofintsika, Ary nentiny ho babo ny aretintsika. "
8:18 Avy eo Jesosy, nony nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy, nanome baiko mba handeha manerana ny ranomasina.
8:19 Ary ny mpanora-dalàna iray, manatona, hoy izy taminy:, "Mpampianatra, Hanaraka anao aho na aiza na aiza no halehanao. "
8:20 Ary hoy Jesosy taminy:, "Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana fialofana, fa ny Zanak'olona tsy mba manana izay hiala sasatra ny lohany. "
8:21 Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy, "Tompo ô, avelao aho aloha handeha handevina ny raiko. "
8:22 Fa hoy Jesosy taminy:, "Araho aho, ary hamela ny maty handevina ny maty ao aminy. "
8:23 Ary niakatra an-tsambokely, nanaraka Azy ny mpianany.
8:24 Ary indro, tafio-drivotra lehibe nitranga tao an-dranomasina, loatra ka ny sambokely dia feno onja; nefa tena, izy natory.
8:25 Ary ny mpianany nanatona Azy, dia nifoha azy, nanao hoe:: "Tompo ô, vonjeo izahay, maty izahay. "
8:26 Ary hoy Jesosy taminy:, "Nahoana no saro-tahotra ianareo, Ry kely finoana?"Dia nitsangana, dia nandidy ny rivotra, ary ny ranomasina. Ary lehibe nitranga filaminana.
8:27 Koa, ny olona atao fahagagana, nanao hoe:: "Lehilahy toy inona ity? Fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza mankatò azy. "
8:28 Ary rehefa tonga manerana ny ranomasina, ho eo an-faritry ny tanin'ny Gerasena, dia nihaona ny roa lahy, izay efa nanana demonia, izaitsizy tokoa izay tokoa no izy Savage, raha nandeha nivoaka avy tamin'ny fasana, fa tsy misy olona afaka miampita tamin'izany lalana izany.
8:29 Ary indro, dia niantso izy, nanao hoe:: "Inona no ho anao, O Jesosy, ny Zanak 'Andriamanitra? Efa tonga eto mba hampijaly anay alohan'ny fotoana?"
8:30 Ary nisy, tsy mba manalavitra izany, ny kisoa maro andiany sakafo.
8:31 Ary nangataka azy ny demonia, nanao hoe:: "Raha avoakanao ary izahay avy eto, Alefaso izahay ho any anatin'ireo kisoa andiany ireo. "
8:32 Ary hoy Izy taminy:, "Mandehana." Ary, mandeha mivoaka, niditra tao an-kisoa. Ary indro, ny kisoa andiany manontolo tampoka Nihazakazaka teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina. Ary maty ao anaty rano.
8:33 Dia nandositra ny mpiandry ondry, ary tonga tao an-tanàna, dia nitatitra izany rehetra izany, sy ireo izay efa nanana demonia.
8:34 Ary indro, ny tanàna manontolo nivoaka mba hitsena an'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy, ka nitalaho tamin'i azy, ka mba hiampita amin'ny fari-taniny.